Cimas boss Madziwadondo dies - NewsDay Zimbabwe
HomeNewsCimas boss Madziwadondo dies
Cimas medical aid division managing director Washington Madziwadondo died on Thursday due to injuries sustained when he was struck by a vehicle in Harare.
The medical insurer said Madziwadondo was struck by a vehicle while on the roadside, talking to a colleague and died in hospital a week later.
“Madziwadondo was involved in a road traffic accident along Samora Machel Avenue on March 3, 2019. He was struck by a vehicle while he was talking to a colleague on the side of the road. Madziwadondo passed away in hospital on March 14, 2019 as a result of the injuries sustained from that accident,” Cimas said in a statement.
Madziwadondo was appointed Cimas MD in 2016.
Previous articleKomichi jailed for gate-crashing Zec command centre
Next articleHellenics Academy makes history